Kadib Seddaxleydii Ronaldo Maxa laga Diiwaan Galiyay Kulankii Dhexmaray Portugal iyo Spain – Gool FM
( Russia ) 15 Juunyo 2018. Portugal iyo Spain ayaa barbaro ku kala baxay kulankoodii ay isku arkeen Group B ee cayaaraha koobka adduunka.
Dheeshan ayaa ahayd mid aad u xiiso badan waxayna labada dal iska dhaliyeen lix gool.
Cristino Ronaldo ayaa dhaliyay Seddaxley halka Spain ay goolasha ka kala heshay Diego Costa oo labo gool dhaliyay iyo Nacho.
Habada maxaad uga baahan tahay inaad ka ogaato kulankii ka dhacay Magaalada Sochi ee Dalka Russia.
Cristiano Ronaldo ayaa dhaliyay seddaxleydii 51-aad ee xirfadiisa kubbada cagta Koox iyo Xulba, iyadoo sido kale seddaxleydiisa ay ka dhigan tahay Hat-trick-gii 51 ee taariikhda laga dhaliyo koobka adduunka.
Cristiano Ronaldo waa xiddigii ugu da’da weyna ee seddaxley ka dhaliyay koobka adduunka taariikhda isagoo jira 33 sano iyo 130 maalin.
Cristiano Ronaldo Free kick-ga uu dhaliyay waa kii u horeyay uu ka dhaliyo tartanka weyn wuxuuna hore u awoodi waayay inuu shabaqada dul dhigo 45 Free kick oo ah marka la isku daro Bilisoonada uu ka tuuray Koobka adduunka iyo Koobka qaramada yurub.
Nacho Fernandez waa cayaariyahankii u horeyay ee u dheela Real Madrid kaa oo gool uga dhaliya xulka ESP meel ka baxsan diilinta ganaaxa tan iyo Fernando Hierro kulan ay la dheelen Nigeria 1998.
Cristiano Ronaldo iyo goolasha uu ka dhaliyay afarta mar uu kasoo muuqday koobka adduunka:
2006 – wuxuu ka dhaliyay 1 gool ( isagoo tuuray 26 shuud )
2010 – wuxuu ka dhaliyay 1 gool ( isagoo tuuray 22 shuud )
2014 – wuxuu ka dhaliyay 1 gool ( isagoo tuuray 22 shuud )
2018 – wuxuu ka dhaliyay 3 gool (isagoo tuuray 3 shuud hal kulan kaliya)
Diego Costa ayaa goolku dhaliyay shuudkiisii u horeyay ee uu ku bartilmaameedsado goolka tartanka cayaaraha adduunka.
Cristiano Ronaldo waa cayaariyahankii afaraad ee gool ka dhaliyay afar koob adduun oo kala duwan kadib ( Pelé, Miroslav Klose iyo Uwe Seeler).
Cristiano Ronaldo waa cayaariyahankii ugu horeyay ee taariikhada gool ka dhaliyay siddeed mar xariir ah tartamada waa weyn (World Cup, European Championships, Confederations Cup).
37.2% Boqolkiiba – Portugal ayaa dhalisay goolasha u badan ee koobka adduunka 15 daqiiqo ee u dambeya cayaarta waa 16 kulan iyo 43 gool.
Cristiano Ronaldo oo laba rikoodh cajiib ah ka sameeyay kulanka Spain ee koobka aduunka 2018